घटना अध्ययनहरु | South2South Network
“यो सहज प्रक्रिया जस्तै महशुस भयो”
भ्ष्mिग ःधबलनबशब, नामक ताञ्जानियाको संस्थाले हालसालै च्ल्ीक्ष् क्ष्लतभचलबतष्यलब िर उनीहरुको साझेदार ...
भ्ष्mिग ःधबलनबशब, नामक ताञ्जानियाको संस्थाले हालसालै च्ल्ीक्ष् क्ष्लतभचलबतष्यलब िर उनीहरुको साझेदार संस्थाहरुले जञ्जिबारमा सञ्चालित एबलवभ परियोजनामा बालसंरक्षण र सुरक्षा नीतिको पुनरावलोकन गर्नका लागि सहयोग गरेको छ ।
च्ल्ीक्ष् क्ष्लतभचलबतष्यलब िका कार्यक्रम व्यवस्थापक त्यm ःभअचयध का अनुसार,
पानीबाट डुब्ने विश्वव्यापी समस्या समाधान गर्न योगदान गर्ने उद्देश्यले मा सन् २०११ मा च्ल्ीक्ष् क्ष्लतभचलबतष्यलब िको स्थापना भएको हो । प्रत्येक वर्ष करिब ३,६०,००० मानिसहरू पानीमा डुब्ने गर्दछन् । अफ्रिका र एशियाका कम आय भएका देशहरूमा मानिसहरू माछा मार्न, पिउन र यातायातका लागि दैनिक क्रियाकलाप स्वरुप खुला पानीमा निर्भर हुन्छन् तर यो एक ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । सन् २०१२ देखि हामीले एबलवभ परियोजना मार्फत जञ्जिबारको दुई ठूला टापुहरू उन्गुजा र पेम्बा क्षेत्रमा सुरक्षितरुपमा पौडी खेल्न र सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै आएका छौँ ।
हामीले शिक्षकहरूलाई पानीको खतराबाट बालबालिकालाई बचाउने उपायहरुका बारे तालिम दियौँ । शिक्षकहरूले ँबिकजअबचम हरूको प्रयोगबाट पानीमा एक्लै प्रवेश नगर्ने, खतरनाक मौसमको अवस्था र पानीको बहावको जाँच गर्ने सन्दर्भमा मुख्य सन्देशहरु तालिममार्फत प्रदान गेका छन् । त्यस क्षेत्रका लगभग हरेक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक छन् । हामीले पौडी सिकाउने शिक्षकहरुलाई ७ देखि १४ बर्षका बालबालिकाको निम्ति समुद्रमा सुरक्षित पौडी खेल्ने कलाको बारेमा पनि प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ । सन् २०१२ मा हामीले परियोजना शुरू गर्दा जञ्जिबारमा पौडी खेल्न सिकाउने शिक्षकहरू थिएनन् र त्यसपछि हामीले ६ जना शिक्षकहरूलाई सुरक्षित पौडी खेल्नेबारे प्रशिक्षण दियौँ । सन् २०१२ मा पौडी खेल्न सिकेका धेरै बालबालिका अहिले ठूला भइसकेका छन् र उनीहरु आफैँ पौडी शिक्षक बनेका छन् । गत वर्ष २८०० बालबालिका पौडी खेल्ने कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
हाम्रो संस्थामा बालसंरक्षण र सुरक्षा नीतिहरू बनाईएका थिए, तर ती नीतिहरु स्थानीयस्तरमा उपयुक्त छन् भन्ने कुराको निश्चित गर्नको लागि हामीलाई नीति विकासको प्रक्रियाहरूमा सहायता चाहिएको थियो । हामी विदेशमा काम गरेको पृष्ठभूमि नभएको च्ल्ीक्ष् को संरक्षण अधिकृतलाई तालिमका पठाउन चाहँदैन थियौँ । हामी स्थानीय अवस्था बुझेको तथा पहिचान भएका कोहि व्यक्तिहरुको खोजीमा थियौँ । मैले तान्जानियामा धेरै संस्थामा कुरा गरें तर हामीलाई सहयोग गर्ने प्रकारको सही व्यक्ति फेला पार्न सकिएन । मैले द्ययलम ँयचगm मा हाम्रो आवश्यकतासम्बन्धी विषयको प्रकाशन गरें र ऋजष्मिज्यउभ ग्प् ले सम्पर्क ग¥यो । त्यसबेलादेखि मलाई यो सहज प्रक्रिया जस्तै महसुस भयो । हामीले बेलायतमा हाम्रो आवश्यकताको बारेमा ऋजष्मिज्यउभ ग्प् सँग छलफल ग¥यौँ । ऋजष्मिज्यउभ ग्प् ले भ्ष्mिग ःधबलनबशब को बारेमा हामीलाई बताउनु भयो र उनीहरुले हामीलाई भ्ष्mिग ःधबलनबशब सँग एबलवभ परियोजनाका लागि सम्पर्क गराई दिनु भयो ।
भ्ष्mिग ःधबलनबशब बाट आएका माइकल रुबेन ९ःष्अजबभ िच्भगदभल० जञ्जिबार आएर परियोजनाको कर्मचारीहरुको लागि बालसुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी तालिमको सहजिकरण गरे । कर्मचारीहरूले तालिम एकदम सहभागितामूलक र धेरै राम्रोसँग सहजिकरण गरिएको प्रतिक्रिया दिए । सहभागीहरुले तालिमको सिलसिलामा सहजकर्ताबाट सोधिएका विषयहरुमा दिएका जानकारीहरूमा पनि सहजता भएको महशुस बताएका छन् । सहजकर्ताले संस्थाको बालसंरक्षण तथा सुरक्षा नीति उपयुक्त तथा प्रभावकारी भए नभएको निश्चित गर्न कर्मचारीहरुसँग छलफल गरे र सबै कर्मचारीहरुले यस विषयमा आफु खुशी भएको बिचार व्यक्त गरे । उनीहरूले बालसंरक्षण नीतिको कार्यान्वयन र पालना गर्नका लागि सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाहरूबारे पनि छलफल गरे । समुद्रका बिभिन्न टापुहरूमा परियोजना चलाउन कठिन हुन्छ र यस्तै कठिन स्वरुप पेम्बा टापुका केहि कर्मचारीहरू माइकलको तालिममा उपस्थित हुन सकेनन् । तर हामीसँग अहिले पञ्जे परियोजनामा कार्यरत संरक्षण अधिकृतले पेम्बा क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई बालसंरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गरि सकेका छन् । हामीले स्थानीयस्तरबाट सिकाईको शुरुवात गरेका छौँ, यो धेरै ठुलो र प्रभावकारी हो । सबै कर्मचारीहरु खुशी थिए । यो सम्भवत सबभन्दा सजिलो चीज मध्ये एक हो जुन मैले अहिले गरेको छु ।
“यस कार्यले ऋजष्मिज्यउभ ग्प् को योगदानको मूल्य प्रदर्शन हुन्छ र बालसंरक्षण र सुरक्षामा नेतृत्वदायी संस्थाले हाम्रो कामलाई मान्यता प्रदान गरेको छ ।”
क्तभखभ ऋचगmउ (स्टीभ क्रम्प) म्भबाप्ष्मश क्ष्लतभचलबतष्यलब िका संस्थापक हुन् । यो विश्वका बहिरा बालबाल...
क्तभखभ ऋचगmउ (स्टीभ क्रम्प) म्भबाप्ष्मश क्ष्लतभचलबतष्यलब िका संस्थापक हुन् । यो विश्वका बहिरा बालबालिकाको सुरक्षामा सुधार गर्नका लागि समर्पित एक परोपकारी संस्था हो । क्तभखभ ले म्भबाप्ष्मश क्ष्लतभचलबतष्यलब िमा ऋजष्मिज्यउभ ग्प् ले बालसंरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी बिषयलाई सबलिकरण गर्न गरेको सहयोगलाई बताएका छन् ।
म्भबाप्ष्मश क्ष्लतभचलबतष्यलब िअरु संस्थाभन्दा फरक छ । प्राय जसो घटनाहरुमा हामी काम गरिरहेको मान्छेलाई सुन्दैनौँ । हामी बहिरा नेतृत्वदायी हौँ र हामी गरेका कामहरू प्राप्त गर्दछौँ । भान्साको टेबलमा राखिएको एक विचारबाट पाँच बर्ष पछि हामी बहिरा बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणको लागि विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्वकर्ता भएका छौं । हामीले म्भबाप्ष्मश क्ष्लतभचलबतष्यलब िको स्थापना पश्चात बहिरा बालबालिकाप्रति हुने दुव्र्यवहार, शोषण लगायत अन्य कुराहरु व्यवस्थापन गर्नका लागि १००% सुनिश्चित हुन चाह्यौँ । बालसुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी अन्य संस्थाका नीतिहरू र पद्दतिहरुलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा लियौं र आफ्नो संस्थाको नीति विकास गर्न शुरु ग¥यौँ । हाम्रो उद्देश्य बहिरा बालबालिकाको लागि उपयुक्त हुने उत्तम अभ्यासको लागि स्तर निर्धारण गर्नु थियो । हामीले यसको पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि उपयुक्त साथी तथा समानस्तरका संस्थाहरुबाट समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने प्रयास गर्यौं । जसको फलस्वरुप हामी ऋजष्मिज्यउभ ग्प् पुगेका थियौँ ।
सन् २०१८ मा हामीले उनीहरूलाई हाम्रो बालसंरक्षण तथा सुरक्षा नीतिको ढाँचा पुनरावलोकन गर्न भन्यौँ । हामी सुनिश्चित हुन चाहन्थ्यौं कि यो अन्य अभ्यासकर्ताहरू, विश्वव्यापी स्वास्थ्य, विकास र मानवीय समुदायहरुबाट भएको परिक्षणमा पनि सफल हुनेछ । यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण थियो किनकि हामीले हाम्रो सोचलाई औचित्य र तर्कसंगत गर्नु थियो । तर यो सशक्तीकरण पनि थियो किनभने यसले हामीलाई पहिला नै धेरै कुरा जानेका छौँ भन्ने अनुभूति गराएको थियो । अक्सर गरेर हामी यी कुराहरुलाई प्रस्तुत गर्ने बारेमा जान्न चाहन्थ्यौँ ।
ऋजष्मिज्यउभ ग्प् कभत सँगको सिफारिसमार्फत काम गर्दा विशेष सहयोग भएको थियो । यो थाहा हुन्छ कि तपाई के गर्नुहुन्छ ? तपाईं अनुगमनका लागि सिद्धान्तहरूको प्रवन्ध गर्नुहुन्छ जस्तोः फैसला नगर्ने, आश्वासन नदिने, सुरक्षित रुपमा हिड्ने, जानकारीहरु तल्लो तहबाट लिने, आदि । त्यसपछि के गर्ने ? तपाईं अन्य आवश्यक अभ्यासकर्ताहरु, क्लिनिक र सामाज कल्याण अनि यस्तै अरुलाई पनि सचेत गर्नुहुन्छ । तर संरक्षण र सुरक्षा प्रक्रियाहरू वास्तविक जीवनमा बाँच्नको लागि छ । ऋजष्मिज्यउभ ग्प् सँग यसबारेमा धेरै अनुभव भएकोले हामीसँग साझेदारीको कार्य तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न उनीहरु सक्षम भए ।
बहिरा बालबालिकासँग काम गर्नका लागि उनीहरुको भाषा र दुव्र्यवहारबारे बुझ्ने दोभाषे भेट्टाउन सक्षम नहुन सकिन्छ । हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्छौँ ? त्यससम्बन्धी जानकारीहरु सहि र उपयुक्त हुनुपर्दछ । बालबालिकाले भनेका कुराहरुलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गर्ने र कुनै कामको बारेमा कसैलाई आरोप लगाउने जस्ता गलत कार्यलाई राम्रो भन्न सक्दैनौँ र भन्दैनौँ । हामी यस्ता प्रकारका घटनाहरुलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न खोज्दैछौँ ।
हामीलाई ऋजष्मिज्यउभ ग्प् ले बहिरा बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणको लागि विशेष र प्रतिबद्ध प्रकारको विषयवस्तु विकास गर्न मद्दत गरेको छ । हामी हाम्रा साझेदार संस्थाहरू क्ष्कबिmष्अ च्भष्भिा, तजभ न्यिदब िएबचतलभचकजष्उ तय भ्लम ख्ष्यभिलअभ बनबष्लकत ऋजष्मिचभल, बलम तजभ ध्यचमि ँभमभचबतष्यल या तजभ म्भबा – तजभ ग्ल् बनभलअथ ायच मभबा उभयउभि (जसले विश्वव्यापीरुपमा ७ करोड बहिराहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ) लाई पनि तालिम दिने योजनामा छौँ । बाल हेल्पलाइनका १० हजारभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताहरूको पहुँचमा हाम्रो सामग्री हुनेछ र ती सामग्रीहरुले बहिरा बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणमा सहायता गर्दछ।
हामीले हाम्रा सामग्रीहरु बाल सुरक्षा र संरक्षणका विशेषज्ञहरूलाई पनि वितरण गरेका छौँ र उनीहरूले यी सामग्रीहरुको अध्ययन तथा परिक्षण गरेका छन् । वास्तवमा, हामीलाई क्ष्क्एऋब्ल् ९तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िक्यअष्भतथ ायच तजभ एचभखभलतष्यल या ऋचगभतिथ बलम ल्भनभिअत या ऋजष्मिचभल० बाट प्रशंसा समेत गरिएको छ ।
यस कार्यले ऋजष्मिज्यउभ ग्प् को योगदानको मूल्य प्रदर्शन हुन्छ र बालसंरक्षण र सुरक्षामा नेतृत्वदायी संस्थाले हाम्रो कामलाई मान्यता प्रदान गरेको छ ।
म कुनै हिचकिचावट बालसंरक्षण र सुरक्षाको परमर्शका लागि ऋजष्मिज्यउभ ग्प् को सिफारिस गर्दछु । उनीहरु शान्त, प्रतिष्ठित, पुर्ण जानकारी भएका, लचिलो, अरुका लागि फैसला नगर्ने, र अनुभवी छन् ।
“उनीहरू अहिले फरक केभिन देख्छन्, पहिलेका थाहा पाएका केभिन होईनन् जसले त्यसलाई गलत तरिकाले व्यवस्थापन गरेका थिए ।”
दक्षिण—दक्षिणको सञ्जालको सदस्य न्बिम’क ज्यगकभ केन्याको मोम्बासा बालन्याय प्रणालीको सवालमा काम गर्दछ ...
दक्षिण—दक्षिणको सञ्जालको सदस्य न्बिम’क ज्यगकभ केन्याको मोम्बासा बालन्याय प्रणालीको सवालमा काम गर्दछ । सन् २०१९ अप्रिलमा न्बिम’क ज्यगकभ ले मोम्बासाको लाइकोनी पुनःस्थापना विद्यालयमा एक हप्ता लामो बालसंरक्षण र सुरक्षा विषयक तालिम सञ्चालन गरे । तालिममा बालबालिकालाई भएको दुव्र्यवहार पहिचान गर्न, परम्परागत संस्कृति र विश्वास प्रणालीबारे जानकारी, दुव्र्यवहारका घटनाहरुको उजुरी गर्न आई पर्ने अवरोधहरुको बारे र शारीरिक सजायको विकल्पहरुको पहिचान गर्ने विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।
यस तालिममा सहभागी केभिन ओटिएनो ओनगुडी ९प्भखष्लभ इतष्भलय इलनगमष्० ले तालिमको बारेमा अझ बढी बताउनु भएको छ ।
म लाइकोनी पुनःस्थापना विद्यालयको सुरक्षा वार्डेन हुँ र म यहाँ दुई वर्षदेखि काम गर्दैछु । यो एक सरकारी संस्था हो र यसले बिभिन्न घटनाहरुमा परेका जोखिम बालबालिकाको लागि काम गर्दछ । अभिभावकहरुले हेला गरेका केहि बालबालिका यहाँ छन् भने कोहि बाल बिज्याँईँमा परेका तथा कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिका पनि छन् ।
बालबालिकालाई हामी हाम्रो हेरचाहमा करिब ३ वर्षसम्म राख्ने गर्दछौँ । उनीहरू सामान्य शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छन् अनि केक बनाउने, सिलाउने, मेशिन बनाउने लगायतका व्यवसायिक तालिममा पनि भाग लिन्छन् ।
मेरो काम बालबालिका र कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने र संस्था बाहिर वा भित्र हुने सम्भावित द्वन्द्व र झगडाबाट पर राख्नु हो । बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न यो क्षेत्रमा ठूलो चुनौती छ किनभने बालबालिका रातीको समयमा बाहिर जान्छन् र लागूपदार्थको सेवन समेत गर्न सक्दछन् । जब उनीहरू छात्रावासमा फर्किन्छन् अनि उनीहरू उदण्ड व्यवहार लगायत हिंसा समेत गर्दछन् ।
न्बिम’क ज्यगकभ सँग मेरो तालिम हुनु अघि म सबै बालबालिकालाई उस्तै देख्ने गर्थें । बालबालिका फरक फरक प्रकारका समस्याहरूमा परेका हुन्छन र त्यसको परिणामबाट उनीहरु फरक व्यवहार गर्दछ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन । कोही बालबालिका घरमा दुव्र्यवहार भएका छन् , उनीहरु आफूलाई अलग्गै प्रकारले सोच्दछन् तर कोही लागुपदार्थको कुलतमा फसेका छन् भने उनीहरुबिचमा नै फरकफरक हुन्छ। अहिले मैले बुझेको छु प्रत्येक बालबालिकालाई बिभिन्न तरिकाले व्यवहार तथा काम गर्नु पर्दछ र मैले बालबालिकासँग काम गर्ने फरकफरक तरिकाहरु र बिचारहरु संकलन गरेको छु ।
यदि एउटा बालक विद्यालयमा चकचके थियो भने म उसलाई शारीरिक सजाय दिने गर्थें । शारीरिक सजायको विकल्पको रुपमा अरु सकारात्मक उपायहरु प्नि छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन । मैले दुव्यवहार गरिरहेको कुरा मलाई थाहा थिएन । अहिले मलाई पछुतो भएको छ । बालबालिका र कर्मचारीहरुबिच अहिले साथित्वको सम्बन्ध भएको छ र हाम्रा बीचमा हाल कुनै प्रकारको अवरोध र बाधा छैन । बालबालिकाले हामीलाई बढी विश्वास गर्छन् र उनीहरूका समस्याहरू लिएर हामीसँग समाधानका लागि आउँदछन् ।
जब एउटा बालकले अभद्र तथा अस्वभाविक व्यपहार देखाँउदछ वा केहि गलत गरिरहेको छ भने म उसँग बसेर समस्याहरूको बारे जान्नका लागि छलफल गर्छु । उनीहरूले कस्ता समस्याका कारण यस्ता व्यवहार गरिरहेका छन् भनेर अझ बुझ्ने प्रयास गर्छु । म तिनीहरूलाई आफुले के गरेको छौँ भनेर सोच्न मद्दत गर्दछु र खराब व्यवहार सही तरीका होइन भनेर बुझाउने प्रयास गर्दछु । बालबालिकाले आफ्नो गल्तीबाट केहि नसिकिन्जेल सम्म न उनीहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्दछु । अहिले उनीहरूले भिन्नै केभिन देख्दछन, पहिले चिनिएको केभिन होइन जसले गलत तरिकाले काम सम्पन्न गर्दथ्यो । मैले गलत बुझेको थिएँ र अब मलाई नयाँ र फरक तरिका थाहा छ । म अहिले परिवर्तन भएको छु भनेर गर्व गर्दछु ।
“आज हामी जहाँ छौँ हिजो यस ठाउँमा थिएनौँ । हामी एभलमभपभशय ीभतग ले गर्दा धेरै माईल अगाडि बढेका छौं ।”
दक्षिण—दक्षिणको सञ्जालको साझेदार संस्था एभलमभपभशय ीभतग केन्यामा सरकारको प्रतिनिधिहरुसँग बालसंरक्षण ...
दक्षिण—दक्षिणको सञ्जालको साझेदार संस्था एभलमभपभशय ीभतग केन्यामा सरकारको प्रतिनिधिहरुसँग बालसंरक्षण र सुरक्षामा तालिम, कानुनी परामर्श र समुदायका कार्यक्रमहरूमा सहआयोजकका रुपमा काम गरिरहेको छ । उनीहरूको कामले कर्मचारीलाई बालसंरक्षणसम्बन्धी सीपहरू, यसका प्रणालीहरू र प्रक्रियाहरू विकास गर्न सहयोग गरेको छ जसले उनीहरूलाई सरकारको राष्ट्रिय बाल सुरक्षा रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउँदछ ।
थप कुराको लागि हामीले नैरोबीको डन्डोरा सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीय क्षेत्रगत सल्लाहकार काउन्सिलका व्यकभउज प्बmष्तजष् (जोसेफ कामिथी) सँग कुराकानी गरेका थियौँ जुन निम्नानुसार छ ।
स्थानीय क्षेत्रगत सल्लाहकार काउन्सिल भनेको के हो ? यस बारेमा कुराकानी शुरु गर्दै केहि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ ?
स्थानीय क्षेत्रगत सल्लाहकार काउन्सिल बालसंरक्षण र सुरक्षाका रणनीतिहरू बनाउने बालबालिकासम्बन्धी सरकारी संरचनाको एक विभाग हो । हामी श्रम र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको बाल विभागसँग प्रत्यक्षरुपमा काम गर्दछौँ । स्थानीय तहबाट उपजिल्ला, जिल्ला हुदैँ बालबालिकाको सेवाका लागि राष्ट्रिय काउन्सिलको सहितको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय क्षेत्रगत सल्लाहकार काउन्सिलले समुदायमा बालसंरक्षणका गतिविधिहरू गर्दछ र उपजिल्लाका बाल अधिकारीलाई तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि प्रतिवेदन दिने गर्दछन् । उनीहरूले सामुदायिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्दछन् र अभिभावक, शिक्षक र बालबालिकासँग बालअधिकारको बारेमा कुरा गर्छन् र दुव्र्यवहारका घटनाहरु भएमा उजुर गर्ने स्थान र सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा समेत जानकारी दिन्छन् । मेरो ठेगाना नैरोबीको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने डन्डोरा भन्ने ठाँउ हो । डन्डोरा एक सुकुम्बासी बस्ती हो जुन पूर्वी र मध्य अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र पनि हो ।
तपाइँले एभलमभपभशय ीभतग को बारेमा कसरी थाहा पाउनु भयो ?
एभलमभपभशय ीभतग ले डण्डोरा सुकुम्बासी क्षेत्रका विद्याालयहरुमा बाल संरक्षण मञ्चहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए । त्यस क्षेत्र वरपरका समुदायहरूमा बाल दुव्र्यवहारका समस्याहरू धेरै छन् । त्यसैले उनीहरूले विद्यालयसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् र शिक्षकहरूलाई बालसंरक्षणको विषयमा तालिम दिएका छन् । एक अवसरमा उनीहरूले सरकारी अधिकारीलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन आमन्त्रित गरे र मैले उनीहरूको कामको बारेमा थाहा पाएपछि मेरा सहकर्मीहरू तथा स्थानीय क्षेत्रगत सल्लाहकार काउन्सिलका साथीहरुलाई पनि बालसंरक्षणको महत्वबारे जानकारी गराउँ ।
तपाइँ एभलमभपभशय ीभतग सँग काम गर्नु अघि यहाँको अवस्था कस्तो थियो?
हामीसँग बालसंरक्षणको सवालमा काम गर्नका लागि त्यति राम्रो जानकारी र ज्ञान थिएन । हामीसँग हाम्रो परिस्थितिको सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान थियो तर बालसंरक्षण र यसका प्रणालीहरुका विषयमा ज्ञान र सिप थिएन । हामीसँग काम गर्नका लागि कुनै साझेदार संस्थाहरु प्नि थिउनन् । हामी अलमल्ल थियौँ, उदाहरणको लागि, एक बालिका फोहोर थुपार्ने ठाँउ नजिक यौन दुव्र्यवहार परेको हामीलाई थाहा थियो तर उनलाई कहाँ सिफारिस गर्ने र कसरी सहयोग गर्ने बारेमा थाहा थिएन । हामीसँग वकिल पनि थिएनन्, त्यसैले समस्यामा परेका बालबालिकालाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर हामीलाई थाहा थिएन । हाम्रो समुदायमा संरक्षण र सुरक्षाको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि सहयोग गर्ने संरचनाहरू समेत थिएनन् ।
तपाईंलाई तालिमले कसरी सहयोग ग¥यो?
हामीसँग सञ्जाल विस्तार गर्ने सीप थिएन तर अहिले हामीले अरूसँग काम गर्नुको महत्व बुझेका छौँ । हामी अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गरिरहेका छौं र हामी उनीहरूसँगै बालसंरक्षणको अवस्था सुधार गर्नका लागि कार्य गरिरहेका छौं । हामीलाई सिफारिस प्रणालीको बारेमा थाहा थिएन तर अहिले हामीले संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि सिफारिसका प्रक्रिया बनाएका छौँ । हामीलाई बालदुव्र्यवहारका घटनाहरु उजुर गर्ने कुरा थाहा थिएन तर अहिले हामीसँग तथ्यांक राख्ने प्रणाली छ र हामी सबै घटनाहरूलाई मुख्य खातामा राख्छौं । हामी आजकाल एक महिनामा करिब २०० बालबालिकालाई सहयोग गर्दछौँ । हामी बस्ने र काम गर्ने समुदायमा बालदुव्र्यवहारका बिभिन्न तहह र उजुरी गर्ने माध्यमको बारेमा राम्रो बुझाई र जानकारी थिएन । बालसंरक्षणको तालिम पछि सामुदायमा चेतनामुलक अभियानहरू एभलमभपभशय ीभतग को सहयोग र स्थानीय क्षेत्रगत सल्लाहकार काउन्सिलको आयोजनामा गरिएको थियो। समुदायका परिवारहरूले पनि बालसंरक्षणमा तालिम प्राप्त गरे र उनीहरुले पनि समुदायमा कमजोर रुपमा भएका बालसंरक्षणका संरचनाहरुलाई सहयोग गर्ने र क्रियाकलापहरु अनुगमन गर्नका सहयोग गरेका छन् ।
एभलमभपभशय ीभतग ले कति सरकारी कर्मचारीहरुलाई बालसंरक्षणसम्बन्धी तालिम दिएको छ ?
प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रगत सल्लाहकार काउन्सिलमा ३० जना व्यक्तिहरूको समिति छ । मेरो निर्जु उप जिल्ला आठ स्थानहरू भएकोले ८ वटा आठ स्थानीय क्षेत्रगत सल्लाहकार काउन्सिलहरू छन् । यसरी यस उपजिल्लाका ८ वटा काउन्सिलहरुका २४० जनाले बालसंरक्षणको तालिम प्राप्त गरेका छन् । तर एभलमभपभशय ीभतग ले कासारानी, स्टारेहे, कामकुञ्जी र लंगटा उपजिल्लाहरुका २३ वटा काउन्सिलहरुसँग काम गरेको छ । ती सबै उपजिल्लाहरुमा बालसंरक्षणको सवालमा तालिम प्रदान गरिसकेको छ । ती चार वटा उपजिल्लाका प्रहरीहरुलाई पनि बालअधिकारको तालिम प्रदान गरिएको छ र त्यसपछि बालसंरक्षणका विषयमा काम गर्नका लागि काउन्सिल र प्रहरीबिच राम्रो सम्बन्ध कायम भएको छ ।
आज हामी जहाँ छौँ हिजो यस ठाउँमा थिएनौँ । हामी एभलमभपभशय ीभतग ले गर्दा धेरै माईल अगाडि बढेका छौं ।